တရုတ် Nafarelin စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | JYMed
E-mail ကို: jymed@jymedtech.com
ဖုန်းနံပါတ်: +86 0755-26612112
Pepitde API ကို
CRO & CMO SERVICE ကို
Peptide API ကိုအလယ်အလတ်
သောက်သုံးသော Finished Peptide
CRO & CMO ဝန်ဆောင်မှု
CAS အဘယ်သူမျှမ: 76932-56-4
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 1322,49 g / mol
sequence: Pyr-သူ့-Trp-SER-Tyr-D-2-Nal-Leu-Arg-Pro ကို-Gly-NH2 acetate ဆား
APPLICATION သို့: Endometriosis, မျိုးဆက်ပွားဆေးပညာအသုံးပြုမှု, ဗဟို ပတျသကျ. အပျိုဖော်ဝင်
လျှောက်လွှာ: လျှောက်လွှာ၏ Fields: Endometriosis ...
DeliveryTime: prompt ကိုတင်ပို့
ProductionCapacity:2ကီလိုဂရမ် / လ
သိုလှောင်မှု:2~ 8 ℃။ အလင်းမှကာကွယ်
တရုတ်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် peptide ထုတ်လုပ်သူ။ GMP တန်းနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မား ယှဉ်ပြိုင်မှုအဘိုးနှင့်အကြီးစား ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်: ယေဘုယျအမြောက်အများ peptide APIs, အလှကုန် peptide, ထုံးစံ peptides နှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး peptides ။
ဆွေမျိုး Molecular Mass :
76932-56-4 (အသားတင်), 86220-42-0 (acetate)
-20 ±5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Pyr-သူ့-Trp-SER-Tyr-D-2-Nal-Leu-Arg-Pro ကို-Gly-NH2 acetate ဆား
မျိုးဆက်ပွားဆေးပညာဗဟို ပတျသကျ. အပျိုဖော်ဝင်များတွင် Endometriosis အသုံးပြုခြင်း
active ပစ္စည်း :
Nafarelin acetate တစ်အစွမ်းထက် LHRH agonist ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးယာယီတိုးပြီးနောက် LH နဲ့ FSH အဆင့်ဆင့်၏ downregulation အတွက် nafarelin ရလဒ်စဉ်ဆက်မပြတ်အုပ်ချုပ်ရေးသားအိမ်နှင့် testicular Steroid တစ်မျိုး biosynthesis တစ်ဖိနှိပ်မှုအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
ကုမ္ပဏီအကြောင်း:ကုမ္ပဏီအမည်: ရှန်ကျန်း JYMed နည်းပညာ Co. , Ltd မှ။ တစ်နှစ်တာတည်ထောင်: 2009 Capital ကို: 89,5 သန်းယွမ်
အဓိကထုတ်ကုန်: oxytocin Acetate, Vasopressin Acetate, Desmopressin Acetate, Terlipressin acetate, Caspofungin acetate, Micafungin ဆိုဒီယမ်, Eptifibatide acetate, Bivalirudin TFA, Deslorelin Acetate, Glucagon Acetate, Histrelin Acetate, Liraglutide Acetate, Linaclotide Aceteate, Degarelix Acetate, Buserelin Acetate, Cetrorelix Acetate , Goserelin Acetate, Argireline Acetate, Metrixyl Acetate, Snap-8, ... ..
peptide ပေါင်းစပ်အတွက်အတွေ့အကြုံဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျနော်တို့အသစ်က peptide ပေါင်းစပ်နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို optimization အတွက်ဆက်လက်တီထွင်မှုဘို့ကြိုးစားကြသည်, ငါတို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းရှိသည်။ JYM အောင်မြင်စွာ ANDA peptide APIs များကိုအများကြီးတင်ပြခဲ့ခြင်းနှင့် CFDA နှင့်အတူထုတ်ကုန်ရေးဆွဲပြီးအတည်ပြုထက်ပို fourty မူပိုင်ခွင့်များပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ peptide စက်ရုံနန်ကျင်း, Jiangsu ခရိုင်မှာတည်ရှိပြီးကြောင့် cGMP လမ်းညွှန်နှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက် 30000 စတုရန်းမီတာတစ်စက်ရုံထူထောင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်စက်ရုံပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာနှစ်မျိုးလုံး client များသဖြင့်စာရင်းစစ်ဆေးနှင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူပါဆုံးယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှု, JYM သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက်အသိအမှတ်ပြုရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်းတရုတ်အတွက် peptides ၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးသွင်းတဦးဖြစ်လာသည်သာမက ,. JYM မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် peptide provider ကတစ်ဦးဖြစ်ထံအပ်နှံသည်။
နောက်တစ်ခု: Acetyl Tetrapeptide-5
Nafarelin Acetate Export
Nafarelin Acetate GMP Export
Nafarelin Acetate GMP ပေးသူ
Nafarelin Acetate GMP ပေးသွင်း
Nafarelin Acetate ထုတ်လုပ်သူ
Nafarelin Acetate ပေးသူ
Nafarelin Acetate ပေးသွင်း
ရှန်ကျန်း JYMed နည်းပညာ Co. , Ltd မှ, (JYMed) 2009 ကတည်းကသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် peptide related ထုတ်ကုန်များ၏စီးပွားဖြစ်အတွက်စေ့စပ်သူတစ်ဦးက high-tech လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
Adress: ရှန်ကျန်းဇီဝဆေးပညာစက်မှုပန်းခြံ, No.14, Jinhui လမ်း, Kengzi လမ်း, Pingshan နယူးခရိုင်, ရှန်ကျန်းမြို့
JYMed ၏ class ငါဆန်းသစ်မူးယစ်ဆေးရူးပြီ ...
သတင်း & EventsThe Peptide ကုန်ပစ္စည်းများ Di ...